16 | अगस्ट | 2018 | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली नियोग असफल छन ।
Posted on 16/08/2018 by सुरेश गुरुङ | टिप्पणी छोड्नुहोस्
दुतावासको भूमिकालाई अरु सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको कार्यदलको आशय जति सुकै राम्रो भए पनि यो बैदेशिक रोजगारीको सुरक्षाको अचुक अस्त्र भने होईन । बरु यसले कुटनैतिक निकायमा जाने कर्मचारीहरुलाई भन्सार र विमानस्थलको जस्तो महंगो जागिर बनाई दिन सक्ने खतरा रहन्छ । पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् →
देशको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार प्रवेशमा थप कडाइ गरिने भएको छ । सिंहदरबारभित्र सामान्य काम लिएर पनि प्रवेश गर्नेको संख्या बढेपछि एकद्वार प्रणालीमार्फत सिंहदरबार प्रवेश गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको भने पनि हाल दैनिक २५ सयभन्दा बढी नागरिक विभिन्न काम लिएर सिंहदरबार प्रवेश गर्ने गरेको प्रहरीको तथ्यांक छ । सिंहदरबारको चारवटै गेटमा डिजिटल गेट निर्माण गर्ने गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सिंहदरबार सुरक्षा समन्वय समितिले गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् →
‘जनताले कर नतिरे कसले तिर्छ ? करको विरोध गर्नु हुँदैन’
काठमाडौं, ३१ साउन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले स्थानीय तहले कर वृद्धि गरेकोमा बचाउ गरेको छ । स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कर उठाउने निर्णय गरेको भन्दै नेकपाले कर उठाउने कार्यको विरोध भन्दा पनि सहयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ । नेकपाका नेता हरिबोल गजुरलेलले जनताले कर तिर्नै पर्ने बताए । ‘जनताले कर तिर्नुपर्छ । नतिरेर हुन्छ ? जनताले कर नतिरे कसले तिर्छ’, उनले भने, ‘अव्यवहारिक छ भने कहाँ–कहाँ समस्या भएको हो सुधार गरौँ ।’ गजुरेलले कर नै उठाउन पाइँदैन भन्न नमिल्ने बताए । पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् →
३१ साउन, काठमाडौं । सरकारले अब विदेशमा रोजगारी गरेर फर्किएकाहरुको पनि तथ्यांक राख्ने भएको छ । अहिलेसम्म यसको थालनी भएको थिएन । रोजगारीका लागि विदेशी जाने नेपालीहरुको रेकर्ड सरकारसँग हुन्छ । तर, विदेशबाट फर्किनेहरुको ’boutमा सरकारी निकायहरु कुनै खोजखबर गर्दैनन् । विदेशमा श्रम गरेर वर्षेनी कति नेपाली स्वदेश फर्किन्छन् भन्ने प्रश्नमा उत्तर दिन नसक्ने सरकारले अब भने एकीन तथ्यांक नै लिने तयारी गरेको हो । पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् →